#CODE - Horudhaca koorsada Naqshadeynta iyadoo la adeegsanayo Ansys workbench - Geofumadas
Tilmaanta aasaasiga ah ee lagu abuurayo jilicsanaanta makaanikada gudaha barnaamijkan falanqaynta xubnahan aadka u wanaagsan.
Injineero badan oo dheeri ah ayaa adeegsada 'Solid Modeler' oo leh habka ugu wanaagsan ee lagu xalliyo dhibaatooyinka maalinlaha ah ee walaaca walaaca, qaab-dhismeedka, wareejinta kuleylka, socodka dareeraha, elektromagnetism, iyo kuwa kale. Koorsadani waxay soo bandhigeysaa uruurinta casharo loogu talagalay maareynta aasaasiga ah ee ANSYS Workbench, oo ah mid ka mid ah moodhalka ugu dhameystiran oo la dheereeyay, jilitaanka iyo barnaamijyada huur-furka.
Fasaladu waxay ka hadlayaan arrimaha abuurista joomateri, falanqaynta walaaca, wareejinta kuleylka iyo habab gariirka. Waxaan sidoo kale ka wada hadli doonnaa jiilalka maaddada aasaasiga ah.
Horumarka koorsada waxaa loo qorsheeyay in la raaco talaabooyinka qaabeynta qaab macquul ah, sidaa darteed mawduuc waliba wuxuu naga caawin doonaa inaan gaarno falanqeyn isku dhafan.
In kasta oo aad ka hadlaysid aasaaska, waxaad heli doontaa tusaalooyin wax ku ool ah oo aad kumbuyuutarkaaga ku ordi karto si aad u kordhiso xirfadahaaga. Waxaad ku hormarin kartaa xawaarahaaga, ama xitaa u tag mowduucyada aad ugu baahan tahay inaad ku xoojiso aqoonta.
ANSYS Workbench 15.0 waxaa lagu soo saaray qaab ah kuu oggolaanaya inaad soo bandhigto qaab cusub oo aad uga shaqeyso mashruucyadaaga qaab ahaan. Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo aaladahaas, inaad ku soo shaqeysay noocyadii hore ama haddii aad bilaabayso.
Qeybta abuurista joomatariga waxaan kugu hagayn doonnaa habka abuurista iyo tafatirka joomeriyada si loogu diyaariyo falanqaynta qeybta farsamada ee ANSYS, iyadoo laga hadlayo mowduucyada:
Abuurista joomatarioyinka 3D.
Ka soo dhowow xog-joogayaasha kale
Qeybaha soosocda waxaan diirada saari doonaa cutubka mashiinka jilitaanka. Halkaan waxaad ku baran doontaa sida loo adeegsado cutubkan si wax ku ool ah si aad u dhisto moodal mishiin isku-dhaf ah, falanqeeyaan oo fasir natiijooyinka, iyagoo ka hadlaya mowduucyo ay ka mid yihiin:
Geedi socodka falanqaynta
Falanqaynta qaab dhismeedka joogtada ah
Falanqaynta Habdhiska Vibration
Daraasad kiis oo leh xaalado badan.
Had iyo jeer waannu cusbooneysiin doonnaa macluumaadka adiga, si aad u heshid koorso firfircoon oo aad ka heli karto xog faa'iido leh iyo wax ku ool ah.
U adeegso ANSYS Workbench si aad ulaxiriirto qoyska ANSYS ee xallinta
Fahamka Guud ee Adeegsiga Guud
Fahmaan hannaanka loo fuliyo jilitaanka static, modal iyo kuleylka
Adeegso cabirro si aad u soo saarto duruufo kala duwan
Waxaa lagugula talinayaa inaad lahaato aqoon hore oo ah falanqaynta walxaha dhammaystiran laakiin muhiim ma'ahan inaad haysato shahaadada injineernimada
Waxaa lagugula talinayaa in barnaamijka laguugu xidho kombuyuutarkaaga shaqsiyeed si uu awood ugu yeesho inaad lasocoto fasalada layliyadaada
Khibrad hore oo ku saabsan maaraynta barnaamijyada leh jawiga CAD
Aqoontii hore ee shuruucda aasaasiga ee farsamada, qaab dhismeedka iyo kuleylka
Farsamoyaqaannada farsamada farsamada ee qaybta naqshadaynta
Post Previous«Previous #LAND - Koorsada Hordhaca Xanuunka Dareenka
Post Next #BIM - Koorsada Aasaasiyada Dhismaha iyadoo la adeegsanayo RevitNext »
Hal Jawaab "#CODE - Hordhac in la naqshadeeyo koorso iyadoo la adeegsanayo Ansys workbench"
Diego villanueva isagu wuxuu leeyahay:
Sideen ku qaadan karaa koorsada… ???